ပိုင်စိုးဝေ – သိန်းစွန်ငှက် အပြန်လမ်း | MoeMaKa Burmese News & Media
(၂၁ – ၃ – ၈၆)
(မိုးမခ ပြန်လည်ဆန်းသစ်ခြင်း) ဧပြီ ၂၆၊ ၂၀၁၈
အမေ …. ကျွန်တော်ရောက်လာပြီ အမေ ။
အမေ့ ခြေအစုံကို ပွေ့ဖက်
အသံမထွက်ဘဲ ကျွန်တော် ငိုတယ် ။
တရှဲရှဲမြည်လို့ … … … … ။
အမေ့ သွားတွေ တင်းတင်းစေ့ထားသလား
ကျွန်တော့် ကို မမြင်ချင်လို့
အမေ့ မျက်လုံးတွေ မှိတ်ထားသလား
စကားပြောပါ ဦး အမေရယ် ။
ဟော .. အမေ …..
ဟိုးမှာ မန်ကျည်းပင်တွေ စိမ်းစိမ်းညို့ညို့နဲ့
ပို့ကြတော့ မလို့တဲ့ ။
ငိုလို့ မရတော့ဘူး အမေ
သူတို့ ငိုပါစေ ။
အမေ့အတွက် သူတို့ငိုပါစေ ။
ထိုက်တန်ပါတယ် အမေ ။
တမ်းတပူဆွေးခဲ့သူပါ အမေ ။
” အမေ ……နေကောင်းပါစေ။
ည အိပ်ရာဝင် ၊ ရင်ထဲလှုပ်ခတ်
တိတ်ဆိတ်စွာ ကြေပြုန်းခဲ့ရ ။
” အမေ့ဆုံးပြီ ၊ အမြန်လာ ” တဲ့ ။
ကုသိုလ်ကြမ္မာ ၊ နုံချာလို့လား
မပြည့်ဝခဲ့ဘူး အမေ ။
အဲသည်လို နောင်တ တရားတွေက
မငိုရဲတော့ ပါဘူး အမေ
ငိုဖို့ရာ ရှက်လှပါတယ် အမေ
ကြေးစည်ကို သူတို့ ရိုက်နှက်ကြပေါ့
လှည်းဘီးကို သူတို့ တွန်းကြပေါ့ ။
အဝေးကို ထွက်သွားပြီ ။
ဟိုး …. လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်နှစ်ဆယ်
အဝေးသို့ ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ ။
သူနဲ့ သူစီးသွားတဲ့ ရထားအကြောင်း
လူတွေ မေ့ကြပေါ့ ။
တစုံတစ်ယောက်မျှ မရှိတော့ ။
ကျွန်တော်ပဲပေါ့ အမေ ….. ။
ကျွန်တော် မမြင်နိုင်ခဲ့ဘူး ။
ထန်းရည်သမား ၊ ထန်းရည်ချိုး ။
ကျွန်တော့် အကိုကြီးရဲ့ မိန်းမက
မီးယပ်ကျိုး၊ မျက်စိတစ်ဘက်ကွယ် ။
သူတို့ တစ်တွေနဲ့ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့
အမေ့မြေး ကလေးတွေနဲ့ အတူ
ထန်းလျက်ကျို ၊ ထင်းခွေရေခပ်
အမေ အနေကြာခဲ့ပါတယ် ။
လှည်းဘီးကို သူတို့တွန်းကြပေါ့ ။
နေလုံးဟာ တဖြည်းဖြည်းညိုခဲ့ပေါ့ ။
အမေ့ကို နှုတ်ဆက်နေကြသလား ။
ရွာဘက်ဆီ ပျံပြေးကြပေါ့ ။
မားမားရပ်နေ တစ္ဆေတွေလား ။
တစ္ဆေဆို ကျွန်တော်ကြောက်လှချည့် ။
” လှည်းမောင်း ပို့ ဆိုပြီး ”
ကျွန်တော်တို့ မိသားစု ဘဝ
ရာဇဝင်ကို ဖြတ်သန်းရတဲ့ညပေါ့ ။
ည တိုင်းပဲ အိပ်ခဲ့ရတယ်
ဟုတ်လား အမေ ။
ကလေးတွေ ကို ပုခုံးပေါ်တင်ပြီး
ပြေးကြလွှားကြ ၊ ပုန်းကြအောင်းကြနဲ့
တချို့ သားသေ ၊ တချို့လင် ဆုံး
မုန်းခဲ့တယ် မဟုတ်လား အမေ ။
အမေရယ် အကိုကြီးရယ် ၊ အမရယ်
စမ်းတဝါဝါး လျှောက်ခဲ့ကြပေါ့ ။
ယုံကြည်ချက်တွေ စွန့်ခဲ့ရပြီပေါ့ ။
သိုး ဆိတ် နွားကျောင်း ။
ကျွန်တော် တို့ တစ်တွေ
ထန်းလျက်ကျို ရက်ကန်းခတ် ထင်းခွေ
” မြို့ရွာနိဂုံး ၊ ပျက်ပြုန်းစေအောင်
မီးနှင့် မြိုက်လို့ ၊ တိုက်ခိုက် ပူလောင်
ဝ သ လ ၊ မှတ်ကြ သူယုတ်ကောင် ”
” ခလောက်လေးရယ်တဲ့ ဒိုးဒိုးဒေါင်
ပျိုတို့ မောင်ယာ မလုပ်တယ်
အဲသည်လို အကိုကြီး တတ်တဲ့
ကဗျာတွေ ၊ သံပေါက်တွေ
ကျွန်တော့် မှာ အမွေရခဲ့ပေါ့ ။
” နေညိုချိန်တိမ်တောက် ပျိုကြောက်တဲ့သည်အချိန်
ဆီးမီးကွယ်မှန်အိမ်နဲ့ …….. ”
ရင်ထဲ မှာ အမြစ်တွယ်ခဲ့ရပေါ့ ။
အမေ့ ရွာနဲ့ အလှမ်းဝေးပေမယ့်
တစ်ယောက်တည်း မထားရက်ပါဘူး အမေ ။
အမေ့အမေ ကျွန်တော် အဘွား
ကျွန်တော်အဘွားရဲ့ အမေ့အမေ စတဲ့
ကျွန်တော်တို့ ပို့ မှာပေါ့ ။
အမေ့ခေါင်းဟာ ၊ လှုပ်ယမ်းလှချည့်
ဖြည်းဖြည်း … ဖြည်းဖြည်း ……..
ကျွန်တော့် လက်နဲ့ ရေစက်သွန်းချ အမျှဝေ
အခုလည်းပဲ ဖုန်လုံးကြီးထဲမှာ ။
ဖုန်တွေ ပေကပ် ညစ်ပတ်နေမလားဘဲ။
ရေစက်သွန်းချ အမျှဝေတဲ့ အခါ
ညီမလေးမှာ ဝတ်စရာအင်္ကျီ မရှိတော့ဘူး ။
စတဲ့ … စတဲ့ စကားလုံးတွေကြား
မင်းတို့ အတွက် ၊ ငါ့အတွက်
ကဗျာ ဆရာလုပ်မှ ဖြစ်မယ် အမေ ”
တရှပ်ရှပ်နဲ့ ကျွန်တော့် ဖိနပ်သံတွေ
ယုန်ထောင် ပတတ်တူး ချိုးတည်
ငယ်ဘဝတွေ ကျန်ရစ်ခဲ့တယ် ။
လက်ပြနေဆဲ ၊ ဥသြဆွဲပေါ့ ။
တရှဲရှဲမြည်လျက် ရထားထွက် ခွာ
အော်မြည်ရင်း ကျန်ရစ်ခဲ့ တယ်။
ခံစားမှုမြစ် ၊ ရသသစ်ထဲမှာ
ဟို … အနောက်တောင်ဆီကို ရော်ရမ်း
ယောင်ရမ်း ရွတ်ဆို မိသော်လည်း
ဖြတ်သန်းရပြီ အမေ ။
နှလုံးသားကို တအား ကုတ်ခြစ်
ယားယံမြဲပါ အမေ ။
ရောဂါထူပြောခဲ့ပေါ့ အမေ ။
အမေ့ထံ ကျွန်တော် ပြန်မလာနိုင်တော့ဘူး ။
အမေ မြင်ချင်လှပြီဆို ။
အစားပုတ်ပုတ် ၊ ဝတုတ်တုတ်ကေလေး
ဆော့တဲ့နေရာမှာ မျောက်ရှုံးပါပဲ ။
ဦးလေးတွေ အဒေါ်တွေနဲ့ တွေ့ဖို့
ဒါပေမယ့် … အမေ ။
အမေ့ သမီး ပိန်တာရိုးလေး
အနိစ္စရောက်ခဲ့ရပြီ မဟုတ်လား အမေ ။
အနေဝေး ၊ အသေဝေးခဲ့ကြရသော်လည်း
ထန်းလျက်ကျို ထင်းခွေ ၊ ရေခပ်
မထောက်ပံ့နိုင်ပေမယ့် ၊ ငတ်မသေခဲ့ဘူး
ငတ်လို့ မဟုတ်ဖူး အမေ ။
အမေဆုံးကြောင်း ၊ ကြေးနန်းရတော့
ခရီးသွားဖို့ ဇနီးမယားနဲ့ တိုင်ပင်
ပြင်ရဆင်ရ ငွေရှာရနဲ့ပေါ့ ။
သြော် .. မင်းတို့ အဖွားသေတဲ့ရက်
ဘာမှ မခံစားရပါလားနော် ။
မြို့ပြမှာနေတဲ့ ၊ အမေ့မြေးကလေးတွေ
မကျေမနပ်ဖြစ်ရပြန်ပေါ့ အမေ ။
ကျွန်တော်ခံစားရပြီပေါ့ အမေ ။
အဲဘတ်ကမူးမှ မဟုတ်ဘဲ ။
မာဆိုးမှ မဟုတ်ဘဲ ။
အသက်ရှင်နေဆဲပါ အမေ ။
အမေရေ …… အမေရေ ……
လှည်းဘီးကို သူတို့ တွန်းကြပေါ့
အမေ့ ရဲ့ ဆွေမျိုးသားချင်းကလေးတွေ
အမေကကို ခင်မင်တဲ့ သူတွေ
မရဏတေးကို ရွတ်ဆိုငိုကြွေးလို့ ။
ဆိုချင်သလား မသိပေဘူး အမေ ။
တရှဲရှဲမြည်လို့ …………… ။
ပိုင်စိုးဝေ ( အစိမ်းရောင်မြစ်သို့ တမ်းချင်း ကဗျာစာအုပ်မှ )
မိုးမခမှာ ၂၀၀၉ တုန်းက ပြန်လည်တင်ဆက်ခဲ့တယ်။
(စာကြွင်း – ဒီကဗျာအတွက် သရုပ်ဖော်ပုံ မတတ်နိုင်ပါ။ စာဖတ်သူကိုယ်တိုင် အသံထွက်ရွတ်ဖတ်ပြီး ကဗျာကို ကိုယ်တိုင်သရုပ်ဖော်ကြည့်ပါ့။) ညိန်းညို ရိုက်ပေးတယ်။
Tags: ချင်း, ပိုင်စိုးဝေ